7 ဗင်းနစ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဗင်းနစ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
သင်တို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်း, ဗင်းနစ်အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အများဆုံးထူးခြားကြည်နူးဖွယ်မြို့ ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်, လျှင်မကမ္ဘာတွင်. အီတလီတူးမြောင်းနှင့်အသေးစားကျမ်းပိုဒ်ထဲကလုံးဝဖန်ဆင်း, အားလုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းအပေါ်ထားတဲ့မုသား၏. ဤသည်ဥရောပတိုက်တွင်အလှဆုံးသောနေရာများထဲကတစ်ခုထဲသို့မြို့လှည့်လိုက်ပါတယ်. အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသင်သိရ. ဗင်းနစ်ပိုပြင်ပတွင်လည်းမရှိဟူသောအချက်ကိုကားအဘယျအမြားအပွားမသိရပါဘူး. ကျနော်တို့ဗင်းနစ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်တချို့၏စာရင်းတစ်ခုပြင်ဆင်ထားရန်လိုခငျြဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်ဤခရီးစဉ်နှင့်အပန်းဖြေမဆိုအားဖြင့်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ. ဒါကြောင့်, သင်၌စိတ်ဝင်စားလျှင် အချို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများသို့သွားရောက်ခြင်း မီးရထားကနေတဆင့်, ဖတ်နေစောင့်ရှောက်7ဗင်းနစ်ခုနှစ်တွင်အီတလီနိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း!
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. thဆောင်းပါးရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. အဆိုပါအလွန်အကောင်းဆုံးနေ့ထဲကတစ်ခုဗင်းနစ်သည် မှစ. Trips: Verona
Verona အဆိုပါ Veneto ဒေသအတွက်တဦးတည်းမှော်မြို့ဖြစ်ပါသည်, မြောက်ပိုင်းအီတလီလူတိုင်းသိတယ်. သူသည်မိမိအကျော်ကြား Romeo ၏တည်နေရာနဲ့ Juliet ပြဇာတ်အဖြစ်ပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်သောအခါရှိတ်စပီးယားက, ထာဝရလုပ်. ယနေ့တွင်, မြို့အလွန်ရေပန်းစားသည်, ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ရန်တိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
သငျသညျအလွန်အမင်းပါ Verona တှေ့လိမျ့မညျ, ထိုသို့တစျဦးဖွစျသညျ အကောင်းဆုံးနေရာများ ဗင်းနစ်ကနေတစ်ရက်ခရီးစဉ်များအတွက်. သငျသညျရထားသွားချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျကဖြစ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် အကောင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံး option ကို ဗင်းနစ်ကနေသွားသည့်အခါ.
Rimini Verona မှရထား
Florence Verona မှရထား
ဗင်းနစ် Verona မှရထား
အီတလီနိုင်ငံကိုချစ်သောသူတို့အားသာ Florence အလည်အပတ်ခရီးဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းကြောင်းကိုငါသိ၏. ဒါဟာအစဗင်းနစ်ကနေအပြည့်အဝနေ့ကခရီးစဉ်အပေါ်အလည်အပတ်ခရီးဖို့အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
လူအတော်များများကဝေးကွာနည်းနည်းကြောင့်သူတို့ဗင်းနစ်ကနေရောက်ရှိနိုင်သောမေ့တက်အဆုံးသတ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျနှစ်ခုသာနာရီအတွင်းဗင်းနစ်ကနေဖလောရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီးနင်း. ဒါကလမ်း, သငျသညျလည်းအများအပြားတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများ ဗင်းနစ်နှင့် Florence အကြားမြေယာကိုဖြတ်ပြီးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြား.
သငျသညျ Florence မှာတွေ့ကြုံခံစားရလိမ့်မယ်အဓိကအမှုအရာဆွဲဆောင်မှုလမ်းများဖြစ်ကြပြီး ကမ္ဘာကျော် Florence ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဒါမှမဟုတ် Duomo မ Firenze. သင်စဉ်းစားပါလိုက်တဲ့အခါ, Florence အားလုံးခရီးသွားများအတွက်အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဦးတည်ရာဖြစ်လာ.
မီလန် Florence မှရထား
ဗင်းနစ်ကို Florence မှရထား
3. ဗင်းနစ် မှစ. အဆိုပါအလွန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ: Padua
လူတိုင်းမ Padua အကြောင်းကိုသိတယ် (အီတလီ: Padova), ဒါပေမယ့်နေဆဲဗင်းနစ်ကနေထိပ်နေ့ကခရီးစဉ်များထဲကတစ်ခုများအတွက်ဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. မြို့တို့သည်ကြီးစွာသောအီတလီမြို့တစ်မြို့ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာအားလုံးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့သဘာဝကျကျကြီးမြတ်အစားအသောက်အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာ, အံ့ဘွယ်သော Piazza.
ဗင်းနစ်ကနေ Padua မှ Going အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နေသည် မီးရထားကနေတဆင့် စီးအီတလီနိုင်ငံအချို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သောနေရာများမှတဆင့်ဝင်အဖြစ်. Plus အား, ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးအဆင်ပြေများနှင့်အလျင်မြန်ဆုံး option ပါပဲ.
သငျသညျ Padua ရသည့်အခါ, Make သေချာသင် Prato della Valle မြို့လယ်သို့သွားရောက်. ဒါဟာမြို့၏အဓိကရင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်, ထိုသို့တဦးတည်းကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ပွားတော်နှင့်ပြည့်စုံသည်.
မီလန် Padua မှရထား
Padua ရထားမှ Verona
Bologna Padua ရထားမှ
ဗင်းနစ် Padua မှရထား
4. ရေကန် Garda
ရေကန် Garda အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အီတလီမှာအကြီးဆုံးရေကန်. ဒါဟာအစအကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်. ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ရန်တိုင်းအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. အဆိုပါရေကန်သဘာဝပေးနိုငျသူအပေါင်းတို့ကိုအလှတရားကဝိုင်းနေသည်. သငျသညျ Magnolia တှေ့လိမျ့မညျ, ထင်းရူးပင်, သံပုရာသစ်ပင်များ, သံလွင်ပင်, မိုက်တောင်များနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးရေကန် Garda န်းကျင်.
သငျသညျဗင်းနစ်ကနေရေကန်ရဲ့ကမ်းခြေအပေါ်အများအပြားမြို့များသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ဗင်းနစ်ကနေရေကန် Garda ဖို့အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်နှစ်ခု Peschiera နှင့် Sirmione ၏မြို့ရွာထည့်သွင်းရန်လိုအပ်နေသည်ဟုခံစားရ. ဒါဟာနှင့်ရေကန် Garda ရောက်ရန်, သင်၏တဦးတည်းယူနိုင်ပါသည် တော်တော်များများရထား နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဗင်းနစ်စွန့်ခွာကြောင်း.
ရေကန် Garda Peschiera ရထားမှ Trento
Bolzano Bozen ရေကန် Garda Peschiera ရထားမှ
Bologna ရေကန် Garda Peschiera ရထားမှ
ဗင်းနစ်ရေကန် Garda Peschiera ရထားမှ
5. ဗင်းနစ် မှစ. အဆိုပါအလွန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ: Siena
လူတိုင်းမ Siena အကြောင်းကိုသိတယ်, ဒါပေမယ့်လွဲချော်ဖို့သင်အလိုရှိတဲ့မြို့မဟုတ်ပါ. ဒါဟာ Tuscany ၏ရတနာနှင့်အများဆုံးထူးခြားအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါသည် အလယ်ခေတ်မြို့ သငျသညျအစဉျအမွဲကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်.
မြို့သေးငယ်သည်, သို့သော်၎င်း၏အဘို့အကြီးမှူးမတ်နေသည် cobbled လမ်းများ နှင့် Piazza del Campos အဖြစ်လူသိများသည့်ခမ်းနားအဓိကစတုရန်း. လည်း, အဆိုပါထူးချွန် Magnia မျှော်စင်ထိုနေ့စတုရန်းအပေါ်ရပ်တည်, ထိုသို့သင်သည် Siena အတွက်မြင်ရပါလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ ရထားစီးနင်း မြို့ဝေးဖြစ်သကဲ့သို့နည်းနည်းပိုရှည်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, Siena သေးငယ်သည်ကတည်းက, သငျသညျရှိသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ဆဲဗင်းနစ်ကနေအံ့သြဖွယ်နေ့ကခရီးစဉ်ရှိနိုင်ပါသည်.
ဗင်းနစ် Siena မှရထား
6. စန်း Gimignano
Siena Tuscany အတွက်သာခမ်းနားမြို့မဟုတ်ပါဘူး. စန်း Gimignano အခြားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးများမှာ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေကို ခံရ. က်ဘ်ဆိုက်များ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောစန်း Gimignano မြောက်မြားစွာအလယ်ခေတ်တာဝါတိုင်များ၏လုပ်ယင်း၏ skyline အားဖြင့်သင်တို့ကိုရှော့ခ်နိုင်ပါတယ်. မြင်ရရန်နှင့်တဦးတည်းကိုသင်မေ့လျော့မည်မဟုတ်အမှန်တကယ်မျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်.
သဘာဝကျကျ, သင်မြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် မီးရထားကနေတဆင့် ကဗင်းနစ်ကနေ site ကိုရောက်ရှိဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်. ပိုကဘာလဲ, သင်သည်လည်းအထက်ပါခေတ်သစ်၏နှစ်သိမ့်ကနေ skyline မြင့်မားဖော်ပြခဲ့တဲ့တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ် အီတလီရထား.
ဗင်းနစ်ဆန်း Gimignano မှရထား
Trieste လိုဗေးနီးယားနှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ် Friuli Venezia Giulia ဒေသမုသာ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး. ဒါဟာအီတလီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့အနေအထားရှိပြီးအဘို့တိုင်းပြည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် မှသြာ 70 နှစ်ပေါင်း. ဒီကြောင့်, Trieste အများအပြားဥရောပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်မူထူးခြားတဲ့ရောနှောဖြစ်ပါသည်.
သို့သျောလညျး, ကြောင်းရောနှောကြောင့်အထူးနှင့်အံ့ဘွယ်သောစေသည်ဘာလဲ အလည်အပတ်ဖို့ရာအရပျ. သင်အလွယ်တကူမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ဗင်းနစ်ကနေရထားမှတဆင့်. မြေတပြင်လုံးစီးကအရမ်းတိုတောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကလှပသောအီတလီကမ်းခြေ traverses သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ကြောင်းအားလုံးကျိန်းသေဗင်းနစ်ကနေသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာခရီးစဉ်တွေထဲကအဘို့ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဦးတည်ရာကို.
ရထား Trieste ဖို့ဗင်းနစ်
ရထား Trieste မှရောမမြို့
ရထား Trieste မှမီလန်
ရထား Trieste မှ Florence
Key ကို Takeaways အကြောင်း ဗင်းနစ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
အလုံးစုံ, တစ်မူထူးခြားသောအနေအထားတွင်ဗင်းနစ်မုသာစကား. သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူအီတလီတာကိုဖြတ်ပြီးအများအပြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများမှခရီးသွားရ. Plus အား, တူညီတဲ့တည်နေရာဗင်းနစ်ကနေ, ဤနေ့ရက်သည်ခရီးစဉ်၏အားလုံးနှင့်များစွာသောပိုပြီးအဘို့ခွင့်ပြု.
သင်တို့သည်ဤ Adventures တဦးကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုကောက်ဖြစ်ပါသည်. သင်ပြုရန်အဘို့အထို့နောက်ထွက်ခွာသွားကြောင်းအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ရထားဘူတာရုံကိုသွားဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက, အဆက်အသွယ်အခမဲ့ခံစားရ တစ်ဦးကရထား Save, ကျနော်တို့ကူညီပေးဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 ဗင်းနစ်ခုနှစ်တွင်အီတလီနိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, သင် / fr မှ / ကသို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား